China Plastic overmolding Manufacturer na Supplier | Meste
Plastic overmoldingbụ usoro ịkpụzi ọgwụ pụrụ iche, nke a na-eji iji jikọta akụkụ nke ihe abụọ n'ime otu akụkụ site na ịkpụzi ọgwụ. A na-akpụ akụkụ abụọ ahụ ugboro abụọ na ebu dị iche iche na igwe ọrụ ntụtụ.
Plastic over ịkpụzi bụ a usoro ebe otu ma ọ bụ karịa ẹdude plastic akụkụ nke dị iche iche ihe na na a ọgwụ ebu tupu ogwu ogbugba, mgbe injection plastic n'ime ebu, na agbara ihe onwunwe mkpuchi ma ọ bụ kechie akụkụ ndị a kwadoro iji mepụta otu akụkụ.
Nzọụkwụ mbụ: dozie akụkụ ahụ edebere. (Mold1)
Nzọụkwụ nke abụọ: tinye ihe edere na mbu ogwu, ma mee ya na ịkpụzi plastik. (Ebu2)
Akụkụ plastic ikpeazụ
E nwere ụdị abụọ nke n'elu ịkpụzi
Pịnye 1: Ihe ndị edobere / ihe ndị dị na plastik, bụ nke e kere na mbụ na ebu ọzọ. Usoro a bụ nke ogbugba ogbugba ogbugba abụọ. Nke a bụ plastic n'elu ịkpụzi anyị tụlere ebe a.
Pịnye 2: Akụkụ ndị edobere abụghị plastik, mana ha nwere ike ịbụ igwe ma ọ bụ akụkụ ndị ọzọ siri ike (dịka igwe eletrọniki). Anyị na-akpọ usoro a tinye ịkpụzi.
Abụkarị pre-prepired akụkụ na-ikpe ma ọ bụ kpam kpam kpuchie site ụdi ihe (ihe plastic) na n'elu-ịkpụzi usoro.
You maara ngwa ngwa nke plastik karịa ịkpụzi?
Enwere ọtụtụ ebumnuche maka plastik karịa ịkpụzi. Nke kacha dị n’etiti ha bụ ndị a:
1. Tinye agba iji chọọ ọdịdị ahụ mma (mmetụta ịchọ mma).
2. Nye ebe nchekwa dị mfe n'akụkụ ahụ.
3. gbakwunye mpaghara na-agbanwe agbanwe na akụkụ nke isiike iji mee ka elasticity na mmetụ mmetụta.
4. Tinye ihe na-agbanwe iji kpuchie ngwaahịa ma ọ bụ akara maka mgbochi mmiri.
5. Chekwa oge mgbakọ. Ọ dịghị mkpa ijikọ akụkụ ọla na akụkụ plastik na aka ma ọ bụ na-akpaghị aka. Naanị ịkwesịrị itinye akụkụ ngwaike n'ime ebu ma gbanye akụkụ plastik. Ọ dịghị mkpa ịchịkọta ya ma ọlị.
5. Mezie otu akụkụ n'ime ibe gị na-ejighi ihe eji eme ihe ma ọ bụ ihe nrapado.
Olee ụdị ngwaahịa bụ plastic n'elu ịkpụzi adabara?
Usoro nhicha plastik kwesịrị ekwesị maka ọtụtụ ngwaahịa, nke dịgasị iche dabere na ọnọdụ akọwapụtara ngwaahịa ahụ. Na-etinyekarị ahịhịa ezé, ihe eji arụ ọrụ (dị ka ihe ndị na-enweghị eriri na screwdrivers) na ngwaahịa nlekọta onwe onye (dị ka karama shampoo na shavers), ọdụ waya, plọg, ndị na-ejide SIM, wdg.
PC & TPU overmolding waterproof ikpe
PC & TPU overmolding waterproof batrị ụzọ
PC & PC / ABS overmolding plastic ikpe maka electronic ngwaahịa
PC & TPU overmolding echebe ikpe maka mobilephone
Abụọ na agba nnukwu size overmolding plastic akụkụ
Ndị a bụ ụfọdụ ihe atụ dị iche iche nke ngwa ngwa:
1. Ike plastic ekpuchi plastic - nke mbụ niile, a isiike plastic tupu Ọnọdụ akụkụ na-guzobere. Mgbe ahụ, a na-agbanye plastik ọzọ siri ike na ma ọ bụ gburugburu akụkụ ndị edoziri. Plastics nwere ike ịdị iche na agba na / ma ọ bụ resin.
2. Ike plastik kechiri na elastomer resin dị nro - nke mbụ, a na-etinye akụkụ plastik siri ike. Elastomer resin (TPU, TPE, TPR) wee kpụzie ma ọ bụ gburugburu akụkụ ndị edoziri. A na-ejikarị nke a na-enye ebe dị nro ejiri aka maka akụkụ siri ike.
3. Plastics ọbọp metal - nke mbụ, a na-eji ígwè, a na-atụgharị ma ọ bụ nwee ya. Mgbe ahụ, a na-etinye akụkụ ndị etinyegoro n'ime oghere ịkpụzi ọgwụ ahụ, a na-akpụkwa plastik ahụ n'ime ma ọ bụ gburugburu ígwè ahụ. Nke a na-ejikarị ejide akụkụ metal na akụkụ plastik.
4.Elastomer resin na-ekpuchi Metal - Nke mbụ, a na-edozi akụkụ nke ígwè ahụ, na-atụgharị ma ọ bụ na-eme ya. Mgbe ahụ, a ga-etinye akụkụ ọla ndị etinyegoro ya na ebu ọgwụ ahụ ma gbanye elastomer resin n’elu ma ọ bụ gbaa ya gburugburu. A na-ejikarị nke a na-enye ihe dị nro, nke dị mma.
5. Soft elastomer resin kechie PCBA ma ọ bụ electronic components, ìhè-emitting modul, wdg
Ọ dị mkpa iburu n'uche na enwere ụfọdụ mmachi na nsogbu ndakọrịta n'etiti ihe dị iche iche dị mkpa ka a tụlee maka ịkpụgharị. Na-ejedebeghị na abụọ iche iche nke ihe. Anyị ahụla ụfọdụ ngwaahịa, na akụkụ nke nwere nsụgharị plastik dị iche iche jikọtara iji nweta ihu igwe nwere ọtụtụ agba. Nke a bụ ihe atụ dị mfe nke ngwaahịa ị ga-amata nke ọma: mkpa.
Ọtụtụ mgbe, a na-etinye akụkụ ma ọ bụ akụkụ akụkụ ndị etinyeburu na ebu ogwu ahụ, bụ nke a na-agbanye ọgwụ mgbochi plastik overmolding n'ime ma ọ bụ gburugburu akụkụ etinyela. Mgbe ihe mkpuchi encapsulated na-eme ka ọ dị mma ma gwọọ ya, a na-ejikọta ihe abụọ ahụ ka ha bụrụ akụkụ dị mkpa. Atụmatụ ndị ọzọ: Ọ na-abụkarị echiche dị mma ịnwe akụkụ ndị ị gbanwere na ihe ndị na-emechi ihe. N'ụzọ dị otú a, enwere ike ijikọta ihe abụọ ahụ ọ bụghị naanị na kemịkal, kamakwa n'ụzọ anụ ahụ.
Kedu uru nke ịkpụzi na mmepụta?
The n'elu ịkpụzi ebu nwere mfe Ọdịdị na mgbanwe usoro.
1. Ọ na-emetụta akụkụ ndị nwere akụkụ mkpuchi buru ibu, ọkachasị akụkụ ndị nwere eriri agbatị. Kinddị ụdị rọba a siri ike ịmịnye ya na igwe nkedo a na-acha agba agba abụọ, nke enwere ike nweta site na nkedo nkedo plastik.
2. Mgbe ọdịdị nke presetị plastik dị mfe na nha dị obere, akụkụ ikpeazụ nwere nnukwu nha, ọ dabara adaba ịnabata
plastic kpuchie injection ịkpụzi. N'oge a, enwere ike ịme ihe eji ebu ihe ebu ma o bu otutu oghere, nke nwere ike belata onu ahia.
3. Mgbe akụkụ ndị edere na ihe ndị a na-ekpuchi ekpuchi bụ plastik niile (resins), a na-atụ aro na a ga-eji usoro ịkpụzi okpukpu abụọ mee ihe na imepụta oke karịa iji kpochapụ iji nweta ogo dị elu, nrụpụta dị elu na ọnụ ala. Mgbe obere ogbe mmepụta ma ọ bụ àgwà chọrọ adịghị elu, overmolding ike ga-eji zere ulo oru mbo nke abụọ-ọgwụ ịkpụzi igwe na elu na-eri nke ebu n'ichepụta.
Kedu ihe ndị ahụ bụ akụkụ ndị etinyeburu?
Anyị na-akpọ akụkụ ndị e debere na mbụ na akụkụ ahụ akụkụ ndị edobere (ma ọ bụ akụkụ ndị edoziri).
Akụkụ ndị edobere nwere ike ịbụ akụkụ ọ bụla siri ike, akụkụ igwe a rụpụtara, akụkụ plastik a kpụrụ, ma ọ bụ ọbụna ngwaahịa dị ugbu a, dị ka akụ, ịghasa, ma ọ bụ njikọ eletrọniki. A ga-ejikọta akụkụ ndị a etinyegoro na plastik mechara gbanye otu akụkụ site na ọrụ kemịkal na njikọta igwe. Elastomer resins (TPU, TPE, TPR) bụkwa plastik, mana ọ gaghị adabara ịbụ akụkụ edebere.
Kedu otu esi ahọrọ resins plastik maka ịkpụzi?
Eriri plastik ndị a na-eji kpụọ ihe na-abụkarị plastik. Ha na-ebido n'ụdị irighiri ihe, ọnọdụ okpomọkụ ha na-agbaze agbaze na-adịkarị ala karịa nke akụkụ edebere iji gbochie akụkụ ndị etinye na mbibi site na nnukwu okpomọkụ. A na-agwakọta ihe ndị a na ihe ndị ọzọ dị ka agba, ndị na-agbọ ụfụfụ na ndị ọzọ. Mgbe ahụ, ọ na-ewe iwe ọkụ na ebe ịgbaze ma gbanye n'ime ebu dị ka mmiri mmiri. Enwere ụfọdụ adịghị na akụrụngwa dabara maka ịkpụzi ya. Ọ bụrụ na akụkụ ndị edoziri bụ akụkụ ígwè, ịnwere ike iji plastik ọ bụla mee ihe dị ka overmolding. Nsogbu ndakọrịta nwere ike ịdị ma ọ bụrụ na etinyere akụkụ ahụ nke resin plastik ọzọ (roba ma ọ bụ TPE) nwere ebe mgbaze dị ala.
You maara na ọgwụ ịkpụzi igwe n'ihi na n'elu ịkpụzi?
Ọgwụ ịkpụzi igwe eji na plastic n'elu-ịkpụzi bụ a nkịtị injection ịkpụzi igwe, nke na-ekewa abụọ na ụdị: vetikal na kwụ.
1. Vetikal injection ịkpụzi igwe enyene ihe ohere karịa keukwu injection ịkpụzi igwe nke otu tonnage, nke na-adịghị mfe ịnọgide na-enwe, otú ahụ na tonnage bụ na-emekarị nta. Karịsịa nke kwesịrị ekwesị maka akụkụ ndị pere mpe ma ọ bụ akụkụ edobere edobe anaghị adị mfe idozi ya na ebu.
2. Igwe nkedo nkedo nke uzo nwere otutu onu ogugu na obere oghere, nke kwesiri maka ịkpụzi akụkụ buru ibu.
Olee otú ịhọrọ ọgwụ ịkpụzi igwe n'ihi na n'elu ịkpụzi?
1. Vetikal injection ịkpụzi igwe na-ejikarị maka obere akụkụ dị ka waya ọnụ na njikọta, ike plọg, anya m na na. Ebu ndị ahụ dị mfe ma rụọ ọrụ nke ọma.
2. A na-eji igwe na-akpụzi igwe eji eme ihe maka nnukwu akụkụ buru ibu, nke nwere ike zuru oke ma nwee mmasị na ịrụ ọrụ.
3. A na-atụnye ịkpụzi agba agba agba agba agba maka akụkụ nke etinyegoro ya na ihe ndị encapsulated, nke nwere ike nweta ezigbo mma na arụpụta ihe karịa ịkpụzi ọgwụ na-arụ ọrụ.
Ọgwụ na ebu na-akpụzi maka ịkpụzi
Mmegharị ihe na-enwekarị usoro ịkpụzi ọgwụ abụọ. Otu bụ maka ịkpụzi akụkụ mbu, akụkụ ọzọ bụ maka ịkpụzi akụkụ ikpeazụ.
Mgbe akụkụ ndị etinyeburu na-abụghị plastik ma ọ bụ na ọ dịghị mkpa ịkpụzi nkedo, ọ bụ naanị otu setịpụrụ ebu ebu ka achọrọ. Anyị na-akpọ usoro a tinye ịkpụzi.
Techlọ ọrụ Mestech nwere ahụmịhe na ịkpụzi ịkpụkpụ plastik, ọkachasị na ịkpụzi ịkpụ akpụ rọba nke mkpokọ nke ngwaahịa dị iche iche eletriki na eletriki na ngwaike dịka akụkụ atọrọ. Mestech nwekwara otutu igwe nwere agba agba agba agba agba agba abụọ, nke nwere ike mepụta ụdị mpempe akwụkwọ plastik dị iche iche, akụkụ mkpuchi plastik nke ebu na ịkpụzi ọgwụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ya, biko kpọtụrụ anyị.
Nke gara aga: Ndụmọdụ maka akụkụ plastik a kapịrị ọnụ na ịkpụzi
Osote: Na-akpụzi cochọ Mma-IML